Fivoriana Atrikasa Anatiny GV – Improv Factor – Andro 1 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Desambra 2017 17:53 GMT
Tanjona sy mpandray anjara
Ny hanampy ireo mpandray anjara mba hampitombo fifandraisana, fahaizamanao amin'ny fanadihadiana am-bava ary ny fahalalana am-po amin'ny alalan'ny lalao no tanjon'ilay atrikasa.
8 no mpandray anjara ary notarihin'i Karolle R ilay WS (atrikasa).
Lalao 1: Fanomanana Fety
Fandaminana: vondrona kely, olona 4-5
Fepetra: efa voalahatra fa hanao fetin'ny faran'ny fihaonana an-tampony isika amin'ny Alahady alina. Tsy fantatsika hoe sahirana tamin'ny fanatambarana ny fandaharam-potoan'ny vovonana an-tampony i Georgia sy Ivan sy ny tarika, ka tsy nanomana na inona na inona ho an'ilay fety. Anjarantsika izao no mikarakara izany miaraka! Inona no hevitra tsara mety hoentintsika ao mba hahazoana antoka fa alina ho tsarovina mandrakizay izany?
Dingana: Mifandimbiasa samy milaza ny heviny ary alamino ny fizotran'ny dingana atao amin'ilay fety. Fihodinana roa, fitsipika roa samihafa:
Fihodinana 1: Isaky ny fihodinana, tokony hamaly hoe ”Eny, fa…” ianareo ary manamarina ny antony tsy mahamety izany hevitra izany.
Fihodinana 2: Isaky ny fihodinana, tokony hamaly hoe ”Eny, ary…” ianao ary manorina avy amin'ny hevitra teo aloha.
Nahatsapa ireo mpandray anjara fa nanome vokany mitombina tsara ilay fampiharana ”Eny, fa” saingy tsy dia lasa lavitra loatra tao anatin'ilay fanomanana ny fety. Etsy an-daniny kosa, nitondra nankany aminà fety adaladala tsy azo tanterahana fa mahafinaritra ny mikarakara sy mieritreritra azy ny ”Eny, ary”.
Lalao 2: Manisa
Fandaminana: ao anaty boribory daholo ny rehetra
Fepetra: Samia manisa amin'ny anjarany (1, 2, 3 …) dia jerentsika hoe hatraiza no farany azontsika raisina
Dingana: Afaka manomboka daholo; afaka manohy ny manaraka daholo. Ny olana: Miverina amin'ny ”1” daholo isika raha misy roa na mihoatra no miaraka miteny. Manaova fihodinana maromaro.
Finaritra tamin'ity iray ity ny mpandray anjara. 11 no isa ambony indrindra ary nanadihady ireo paikady samihafa nampiasain'ny olona tsirairay izahay rehefa teo amin'ny fotoana nanapahany hevitra ny hamaly izy ireo. .
Lalao 3: Lalao Fanontaniana
Fandaminana: tsiroaroa na vondrona olona 3, arakaraky ny isan'ny mpilalao
Fepetra: Mamaritra toerana ho an'ny tantara iray ny mpanamora, ary ny tsiroaroa / vondrona tsirairay dia miaraka miasa mba hamaritra ny zava-mitranga ary manohy ilay tantara.
Dingana: Samia maka ny anjara fitenenany. Ny olana: Endrika fanontaniana irery ihany no ahafahanao mamaly ny fanontanian'ny hafa.
Nanofa angidimby ianao. Inona no miseho manaraka?
Mifoha eny amoron-dranomasina ianao ary tsy mahafantatra hoe ahoana no fomba nahatongavanao teny.
Andro voalohany andehananao any am-tsekoly izao.
Nanampy mba hanasongadinana ireo tsiliantsofina ilaina mba hihainoana tsara sy hahatonga ireo olona hanohy resaka ity fampiharana ity.
Lalao 4: Mitenena Amin'ny Teninao (hafa ankoatra ny Anglisy!)
Fandaminana: mandray ny sehatra ireo mpanolo-tena 3-5, ny sisa eny amin'ny mpanatrika.
Fepetra: Mba tia karokaroka ary miaraha miasa mba hanangana sy haneho tantara maro samihafa.
Dingana: Mpandray anjara manolo-tena eny an-tsehatra. Mikiaka ny sehatra na ny toe-javatra fepetra mba hanombohana ary hilalaovana ilireo tantara ny mpanatrika (oh: ”Eny ambony sambokely iray ianareo!” ”Izao vao tonga saina ianao fa very 1.000 dolara!”). Miasa ireo mpilalao mba hitantara tantara iray ary hilalao ilay tantara saingy tsy maintsy miresaka amin'ny teny hafa ankoatra ny Anglisy. Afaka mitsambikina miditra ao ny avy amin'ireo mpanatrika ary ”mandona” ny olona iray hiala eo ambony sehatra. Rehefa tafiditra ity mpilalao vaovao ity, manomboka fepetrana hafa iray vaovao indray ho an'ilay tantara ireo mpanatrika.
Nahita fahombiazana nampientam-po be ity fampiharana ity. Nanaovana famerenana tamin'ilay fihaonana anatiny.
Nasaina mba hampiasa ireo fombafomba nianarany tao anatin'ireo andro nisesy nandritra ireo fivoriana anatiny sy ho an'ny besinimaro ireo mpandray anjara.
Mba mifandraisa amin'i Karolle ho amin'ny vaovao bebe kokoa momba ity atrikasa ity.